शब्दकोशको राजनीति- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
‘नेपाली शब्दकोश’ ले पाठकलाई कस्तो अर्थ सिकाइरहेको छ ? यसका शब्दार्थले आम मानिसमा कुनै जात, लिंग, धर्म, वर्ण र क्षेत्रका व्यक्ति वा समूहप्रतिको दृष्टिकोण निर्माणमा कत्तिको सकारात्मक वा नकारात्मक भूमिका खेलिरहेका छन् ?
मंसिर ४, २०७८ प्रणेता
मेरा फेसबुके मित्रले एक चर्चित लेखकलाई ‘इनबक्स’ मा सोधेछन्– ‘राम्रो लेखक बन्न के गर्नुपर्छ ?’ लेखकको जवाफ आएछ– ‘नेपाली शब्दकोश पढ्नुहोस् !’ सुझाव काइदाको लाग्यो । शब्दसँग खेल्ने लेखकहरूको कला मनमोहक हुन्छ । त्यसका पछाडि शब्दकोशले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थाहा पाउँदा रमाइलो लाग्यो । भाषा सिक्ने समाजबाट कि शब्दकोशबाट ? शब्दकोशकै स्रोत समाज हो कि अरू नै केही ? यी प्रश्न एकछेउ राखेर पहिले शब्दकोशभित्रै छिर्ने रहर गरेँ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले छापेको ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ को एप (दसौं संस्करण) ‘इन्स्टल’ गर्न ‘प्लेस्टोर’ मा पसेँ ।
‘नेपाली शब्दकोश’ ले पाठकलाई शब्दहरूका कस्ता अर्थ सिकाइरहेको छ ? यसका शब्दार्थले आम मानिसमा कुनै जात, लिंग, धर्म, वर्ण र क्षेत्रका व्यक्ति वा समूहप्रतिको दृष्टिकोण निर्माणमा कत्तिको सकारात्मक वा नकारात्मक भूमिका खेलिरहेका छन् ? शब्दकोशले सिकाएका अर्थले कुनै व्यक्ति–समुदायले दोस्रो पक्षलाई गर्ने व्यवहारमा फरक पार्छ कि पार्दैर्न ? शब्दकोश निर्माण र प्रकाशनमा खटिनेले के आधारमा अर्थ निकाल्छन् ? यसमा काम गर्नेहरूको मानसिकतामा कुन पक्षले प्रभाव पारेको हुन्छ ? यो लेख यिनै प्रश्नवरिपरि केन्द्रित छ ।
शब्दहरूको अपमानजनक अर्थ
शब्दकोशभित्र गहिरिएर पस्ने हो भने त्यस्ता अनेक शब्द भेटिन्छन्, जसले भेदभावयुक्त अर्थ बोकेका छन् । उदाहरणका लागि ‘अछुत’ र ‘अछुती’ लाई लिउँ । ‘अछुत’ को अर्थ लेखिएको छ– ‘छुन नहुने, पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नुपर्ने भनी मानिएको समुदाय, छुन नहुने वा नछोइएको’ । समानार्थी शब्द ‘अस्पृश्य’ पनि उल्लेख छ । ‘अछुती’ लाई कसरी अर्थ्याइएको छ भनी खोज्दा ‘छुन नहुने, तथाकथित तल्लो जातको’ मात्रै लेखिएको पाइन्छ । तर, ‘हिन्दु वर्ण व्यवस्थाअनुसार नयाँ मुलुकी ऐन लागू हुनुभन्दा पहिले’ भनेर अर्थलाई विस्तारमा खुलाइएको भने छैन ।
अर्को शब्द छ, ‘बिटुलो’, जसलाई ‘अरूसँगको छुवाछुत वा लसपसमा परेको’ भनी अर्थ्याइएको छ । यहाँनेर तिलक विश्वकर्माको ‘दलित महिलासँग विवाह गरेर बिटुलिएका यी बिटालु, जसलाई समाजले दलित ठान्छ अनि कानुनले बेग्लै’ शीर्षकको आलेखको प्रसङ्गमा जानु आवश्यक हुन्छ । कुन वर्ण वा समुदायको मानिस कुन वर्ण या समुदायको मानिसको ‘सम्बन्धमा वा सम्पर्कमा’ रह्यो भने ‘बिटुलिएको’ अर्थात् ‘अशुद्ध’ वा ‘जुठो’ बनेको ट्याग लाग्छ ? भनिरहनै पर्दैन । शब्दकोशले स्वच्छ, सफासुग्घर वातावरणमा रहनेलाई पनि सधैं अशुद्ध र फोहोरी देखिरहन्छ । यसकारण कि उनीहरू कथित निम्न दर्जामा राखिएका छन् । अर्थमै जोड दिने हो भने ‘बिटुलोको मतलब चोखो नभएको अशुद्ध, जुठो’ पनि लेखिएको छ । सामाजिक परम्पराले जसलाई कथित नीच स्थानमा राखेको छ, तीसँग कथित उपल्लो स्थानमा रहेका वर्णहरूको सम्बन्ध र सम्पर्क भएमा बिटुलिएको अथवा त्यो सम्बन्ध जुठो भएको मानिन्छ ।
पञ्चम वर्णअन्तर्गत विभिन्न पेसा, व्यवसाय गर्ने जातका व्यक्ति/समूहका लागि पनि अनेक गालीगलौज र अपमानबोधक शब्दार्थ रचना गरिएको छ । जस्तै ः ‘डुम’ लाई ‘कुनै बालखेलमा अछुत बन्ने व्यक्ति’ भनिएको छ । अछुत अर्थात् पानी बारिएको जात ! तब न ‘डुम’ ले हियाएर तुच्छ आवाजमा बोलिने शब्द बुझाउने भयो । यही अधम र निकृष्ट बुझाउने शब्दको अर्थसहित उदाहरण पनि दिइएको छ (हेर्नुहोस्– ‘यत्ति नाना फाट्यो, मुसाले काट्यो, सिलाइदेऊ न डुम दाइ !) ।
यत्तिमै टुङ्गिँदैन शब्दार्थको कुरा । ‘डुम’ भनेको ‘चाण्डाल जाति विशेष, डोम वा डुम्रो’ हो भन्ने अर्थ पनि लेखिएको छ । के भन्नैपर्छ भने शब्दकोश निर्माणमा संलग्न कथित बौद्धिकहरू अर्को जातिलाई आजीवन ‘नीच र घृणित’ बनाइरहने कर्ममा २०४० सालदेखि नै जुटिरहेका छन् ।
‘पोडे’, जसलाई ‘नेवार जातिको एउटा निम्न वर्ग, फोहोर–मैला आदि सफा गर्ने जाति, चाण्डालको एक भेद’ भनेर परिचय गराइएको छ । ४० वर्षअघिको र आजको पोडेको पहिचान ‘फोहोरमैला सफा गर्ने जाति’ मै सीमित गर्नु उचित छ त ? आफ्नो करङ रगडेर हैसियत निम्नबाट मध्यममा उकासेको एक पोडेको सन्तानले यो शब्दग्रन्थमा आफूलाई यसरी अर्थ्याइएको पाउँदा र ‘चाण्डाल’ सरोबर आफ्नो जाति हो भनेर पढ््नुपर्दा के उसको शिर झुक्दैन ? अर्को प्रश्न, फोहोर गर्ने मानिस फोहोरी हो कि फोहोरमैला सफा गर्ने मानिस ?
वास्तवमा ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ मा कथित ‘अछुत’ जातबारे ‘खराब स्वभाव र चरित्र भएको, दुर्जन र दुष्ट’ भन्ने अर्थ निर्माण गरिएको त छ नै, उनीहरूले अँगाल्ने पेसालाई पनि अपमानजनक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यही प्रवृत्ति ‘पहाडे’ शब्दको अर्थमा पनि देखिन्छ । शब्दकोशअनुसार, ‘पहाडे’ विशेषणको अर्थ ‘जङ्गली, पाखे, असभ्य’ हुन्छ । थुप्रै हास्यव्यंग्य कार्यक्रम, टेलिसिरियल आदिमा ‘पहाडे’ ‘मदिसे’ आदि पात्र यस्तै अर्थमा बनाइयो, देखाइयो । पछिल्लो राजनीतिक चेतनाले सामाजिक व्यवहार बदलिने क्रम जारी छ, तर शब्दकोश नबदलिनु हास्यास्पद छ ।
अब जाऊँ जनजातितर्फ । अहिले जनजातिहरू आफ्नो भाषा, संस्कृति, भूमिथलो, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारका निम्ति लडिरहेका छन् । जनजाति शब्दको अर्थ पुरानो शब्दकोशमा बताएजस्तो कदापि छैन । शब्दकोशमा ‘जनजाति’ लाई ‘सिकार खेली जीविका चलाउने आदिम जातीय समुदाय’ लेखिएको छ । सँगै ‘कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जाति’ पनि भनिएको छ । यसरी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा सरकारी दाना–पानीको सुविधासहित शब्दार्थ निर्माणमा जागिरे बनेका पहाडे उच्च जातीय खस पुरुषहरूको डफ्फाले जनजातिलाई शब्दार्थमार्फत दिएको परिचयले साम्प्रदायिक र जातवादी राजनीति गरेको होइन त ? इतिहासमा जनजाति आन्दोलनले निर्माण गरेको अर्थ र परिचय पनि त छ ! नयाँ परिचय निर्माण गरेको जनजाति आन्दोलनले आफ्नो परिचयको गौरवमय अर्थ शब्दकोशमा अभिलेख गर्न पहल गर्नैपर्छ ।
शब्दकोशले लेखेका अर्थहरूबारे कुरा गर्दा ‘दलित’ शब्दलाई छुटाउनु हुँदैन । शब्दकोश भन्छ– ‘दलित’ भनेको ‘दमन गरिएको, थिचिएको, कुल्चिएको’ हो । यो अर्थबाट हेर्दा छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्यको विकल्प के हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा वर्ण व्यवस्थाबाट उत्पीडित समुदायलाई ‘दलित’ सम्बोधन गर्नुहुँदैन । किनकि शब्दकोशमा दलितको अर्थ ‘फग्ल्याँटै फग्ल्याँटा पारिएको’ लेखिएको छ र यो ठीक परिचय भएन भनिएको पनि सुनिन्छ । यसबारे आहुतिको विचार छ, ‘शब्दकोशमा जे अर्थ लेखिए पनि दक्षिण एसियाको दलित आन्दोलनले दलित शब्दको नयाँ र गौरवमय अर्थ निर्माण गरिसकेको छ । आफ्नो आन्दोलनले नै निर्माण गरेको दलित शब्दको नयाँ अर्थलाई शब्दकोशमा समावेश गराउन दलित आन्दोलनले नै पहल गर्नुपर्छ । अब निर्माण हुने शब्दकोशमा दलित शब्दको नयाँ र गौरवमय अर्थ लेखिनुपर्छ ।’
यसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ– समाजले भन्ने ‘अछुत’ या ‘दलित’ को अर्थ अब परम्परागत अर्थमा मात्रै सीमित रहेन । अछुत र दलित पर्यायवाची शब्द हुँदै होइनन् । आहुतिकै शब्दमा भन्नुपर्दा, दलित कुनै उत्पीडक समुदायले हेपेर, अपमान गरेर वा षड्यन्त्र गरेर दिएको शब्द होइन । आफू तल भएको नस्वीकारी, आफूलाई अत्याचार भएको थाहा पाएर र बोध गरेर त्यसबाट बाहिर निस्किन सङ्घर्षरत समूह नै दलित हो ।
तसर्थ पाठकले बुझ्न करै लाग्ने विषय यो छ कि शब्दको पुरानै अर्थ शब्दकोशमा राखिरहनु यसका निर्माता र राज्यको बेइमानी हो । त्यहाँ अर्थ अदलाबदली होला/नहोला, तर दलित र जनजातिबारे पालेको धारणामा भने परिवर्तन ल्याउनैपर्छ । शब्द र व्यवहारमा संघर्षले ल्याएको परिवर्तनलाई अपनाउनैपर्छ । शासकले अपमानसहित हेलाँहोचो गर्न राखिदिएको नाम ‘अछुत’ हो भने संघर्षबाट बनेको एक गौरवमय शब्द ‘दलित’ हो । आम मानिसलाई शब्दार्थमार्फत कसैको मानहानी गर्ने छुट छैन र हुनु पनि हुँदैन । तिनै जनताको करबाट चलेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्तो संस्थालाई त झनै छुट छैन ।
अर्थमा झल्किने लैंगिक दृष्टिकोण
शब्दकोशले नेपाली भाषाभाषीलाई विशेष सेवा पुर्‍याएको छ भन्ने दाबी छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा २०७५ मा संशोधित तथा परिवर्तित र डा. यज्ञेश्वर निरौलाद्वारा परिमार्जित यस शब्दकोशबाट विशेष सूचना लिन पाइएकोमा पाठकलाई यो नेपाली भाषाको अनुपम संयोजन पनि लाग्ला ।
हालसम्म ६० हजारभन्दा बढी प्रति (दिइएको विवरणअनुसार) विक्री भइसकेको यस ‘मूल्यवान्’ शब्दकोशमा ‘पुरुष’ को समानार्थक शब्दमा ‘लोग्नेमान्छे, लोग्ने, मानवजाति, भाले जातिको प्राणी, साङ्ख्यशास्त्रका अनुसार प्रकृतिदेखि भिन्न, अपरिणामी कर्ता, आत्मा, विष्णु, जीव’ जस्ता नामहरू दिइएको छ । त्यही ‘पुरुष’ लाई ‘भाले, वीर, आँटी’ जस्ता विशेषण पनि झुन्ड्याइएको छ । ‘पुरुष’ शब्दका समानार्थी शब्द अधिक छन् । स्त्री, महिला, नारी आदि जे भनेर खोजे पनि यिनका अर्थ ‘भद्र नारी, स्वास्नीमान्छे’ सिवाय अरू भेटिँदैन । न त विशेषण नै पुरुषलाई जसरी दिइएको छ । यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने ‘मानवजाति, जीव’ शब्द ‘पुरुष’ शब्दको समान अर्थमा व्यवहारीकृत छ । तर, ‘नारी’ को अर्थ भने सतही र सिमित छ ।
शब्दकोशले नारीलाई ‘महिला’ मात्रै ठानेको छ । तर, पुरुषलाई ‘प्रकृतिदेखि भिन्न’, ‘मर्द जीव’ आदि मानेको छ । ‘मर्द अर्थात् शक्तिशाली र साहसी’ । तर, ‘मर्द’ को स्त्री सम्बोधन भने छैन । यो शब्दकोशले ‘नारी शक्तिशाली हुन्छन्’ भनेर स्विकारै गर्दैन । त्यस्तै ‘अपरिणामी कर्ता’ पनि मानेको छ, पुरुषलाई । अर्थात् ‘अवस्था वा रूपमा हेरफेर नहुने र अविकारी’ जीव हो, पुरुष । संरचनाको टुप्पोमा रहेका र उच्च सामाजिक हैसियत भएका पुरुषहरूको अवस्था सधैं यस्तै रहिरहन्छ भन्न खोजिएको हो ? यस अर्थको भुमरीमा चक्कर लगाउँदा हजुरआमाको भनाइ याद आउँछ, ‘छोरामान्छे भनेका छोरैमान्छे हुन् !’ हजुरआमाले ‘छोरीमान्छे पनि छोरीमान्छे नै हुन्’ भन्न किन नसकेको होला ?
‘लोग्नेमान्छे’ लाई शब्दकोशले ‘विष्णु’ समान ठान्छ । विष्णुलाई हिन्दु धर्मशास्त्रले ‘सृष्टिको रचना, पालना र संहार गर्ने तीनमध्ये एक देवता’ मान्छ । शब्दकोशले ‘विष्णु’ को निकटमा ‘लोग्नेमान्छे’ लाई राखिदिएको छ । मान्छेलाई जन्म दिएर जसले पृथ्वीलाई ‘मनुष्यको दुनियाँ’ बनाउन अहम् भूमिका खेलेका छन्, तिनलाई शब्दकोशमा कुनै देवता (पूज्य) मानिएको छैन । संसारभरीका महिला आन्दोलनले ‘नारी’ वा ‘महिला’ शब्दको अर्थ नै बदलिसकेको छ । वैज्ञानिक, बौद्धिक, लडाइँका कमान्डर आदि जुनसुकै भूमिकामा नेपालकै नारीहरूले पनि अब्बल परिचय दिइसकेका छन् । ‘नारी’ र ‘महिला’ शब्द मात्रै होइन, अरू कैयौं शब्दको अर्थ महिलाहरूको विद्रोहकारी भूमिकाले बदलिसकेको छ । तर, शब्दकोश निर्माताहरू पितृसत्ताको जुगौं पुरानो अर्थभित्र कैद हुनु लाजमर्दो विषय हो ।
शब्दकोशमा ‘चाण्डाल’ को अर्थ लेखिएको छ– ‘ज्यादै नीच र घृणित जाति वा त्यस जातिका मानिस’ तथा ‘दुष्कर्मी, दुष्ट, क्रूर व्यक्ति’ । याद गर्नुहोस्, शब्दकोशमा ‘व्यक्ति’ जनाउँछ, तर ‘पुरुष’ जनाउँदैन, चाण्डालले । यही शब्दकोशमा ‘चण्डाल्नी/ चण्डालिनी’ शब्दलाई ‘दुष्ट स्वभावकी स्त्री’ भनी अर्थ्याइएको छ । यसर्थ बुझ्न करै लाग्छ, ‘चण्डाल वा चण्डाल्नी’ या त नारी हुन्छन्, चाहे जुनसुकै समुदायका होऊन् या त वर्णव्यवस्थाअनुरूप कथित तल्लो जात वा समुदायका मानिस हुन्छन् । ‘निरीह र समाजमा वर्जित प्राणी’ बनाएर मात्रै नअघाएको र तुष्टि नमिलेको ब्राह्मण पुंसताले ती मानिसलाई ‘ज्यादै नीच र घृणित’ को झुण्डमा भर्ती गरेको छ ।
‘बोक्सो’ शब्दको अर्थमा पनि ठ्याक्कै यस्तै देखिन्छ । शब्दकोशअनुसार, ‘बोक्सो’ भनेको त्यो ‘भाले जाति’ होइन, न त ‘वीर र आँटी लोग्नेमान्छे’ नै हो । त्यहाँ अर्थ्याइएअनुसार, ‘बोक्सेरो वा टुनामुना जान्ने व्यक्ति अथवा टुन्याहा’ नै ‘बोक्सो’ हो । यसबाहेक ‘बोक्सो’ कसैलाई भनिन्छ भने ‘सार्कीले जुत्ता सिउँदा प्रयोग गर्ने साधन विशेष’ लाई भनिन्छ । ‘विष्णु’ सरह हैसियत बनाइएको ‘शक्तिशाली मर्द’ लाई ‘बोक्सो’ भनिँदैन । उसोभए ‘बोक्सी’ कसलाई देख्छ त नेपाली आधिकारिक शब्द भण्डारले ? त्यही कला भएकी स्त्रीलाई ! यति मात्र होइन, यस्तो कलामा निपुण स्त्रीलाई शब्दग्रन्थले ‘डङ्किनी, डाइनी’ करार गरिदिएको छ । जुन नामलाई शब्दकोशले ‘आफ्नो बिगार गर्ने वा मन नपरेकी स्वास्नीमान्छेलाई गाली गर्दा भनिने शब्द’ भनेको छ । तर, बिगार गर्ने लोग्नेमान्छेलाई ‘बोक्सो वा डाइनो’ भनेर चिनाइएको छैन ।
‘पिशाच/पिशाचिनी, अलच्छिना/अलच्छिनी/कुलच्छिनी, डाइनी’ जस्ता ‘अमङ्गल’ भाव दर्साउने र वैगुण/दुर्गुण हुनेमा न्यूनतम ‘व्यक्ति’ र अधिकांश ‘महिला’ नै हुने भनेर कोष्ठभित्र ‘स्त्री’ राखीकन तोकेको छ शब्दकोशले । तर, यसरी नै पुरुषलाई तोकेर यस्ता कुनै विशेषण भिराइएको छैन ।
पत्नी बितिसकेको पुरुष ‘विदुर’ कहलिन्छ । उसलाई शब्दकोशमै उल्लिखित शब्दमा भन्दा ‘राँडो’ भनिन्छ । तर, यही शब्दकै स्त्री सम्बोधनले ‘पतिको देहान्त भएपछिकी पत्नी, विधवा’ मात्रै ‘राँडी/राँड’ हो भन्दैन । ‘स्त्रीलाई गाली गर्दा’ पनि यही शब्द बिनासङ्कोच प्रयोग गर्ने गरिएको छ । आम पाठकले ‘राँडी/राँड’ अर्थात् ‘एकल महिला’ बराबर ‘रण्डी/वेश्या’ हो भनी दिमागमा राख्छन् । शारीरिक कमजोरी भएका व्यक्तिलाई पनि शब्दकोशले अपमान र अन्याय गरेको छ । ‘अन्धो’, ‘लङ्गडो’, ‘खोरन्डो’, ‘कानो’, ‘डेडो’, ‘बहिरो’, ‘लाटो’ जस्ता शब्द हिजोआज अपमानजनक शब्दका रूपमा चिनिन्छन् । तर, शब्दकोशले परम्परागत अपमानलाई नै निरन्तरता दिएको छ, बदल्ने कष्ट उठाएको छैन ।
‘नपुंसक’ को अर्थ लेखिएको छ– ‘स्त्री वा पुरुष नछुट्टिएको प्राणी, हिजडा’ । यति मात्रै होइन ‘कुनै पनि काम कुरामा आँट नभएको व्यक्ति, हिम्मत वा साहस नभएको मानिस’ लाई पनि ‘नपुंसक’ मान्छ शब्दकोश । के यस समूहका मानिस आँटिला, हिम्मतिला वा साहसी हुँदैनन् ? ‘तेस्रो लिङ्गी’ वाक्यांशसमेत व्यापक प्रयोगमा आएर पनि ‘पारलैङ्गिक’ ‘समयौनिक’ जस्ता शब्दले विस्थापित हुन थालिसक्यो । अहिलेसम्म पनि यी शब्दमा पुनर्विचार गर्ने र सच्याउने वा अर्थको विकासक्रम दिने काम नगरिनु ताज्जुबलाग्दो छ ।
शब्दकोशमा संलग्नको मानसिकता
प्रतिष्ठानमा रहेर शब्दकोश निर्माण, परिमार्जन र संशोधनमा लागेका २०४० सालदेखिकै सदस्यलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ अधिकांश ब्राह्मण पुरुष देखिन्छन् । पछिल्लोपटक गठित ११ सदस्यीय ‘प्राज्ञ परिषद्’ मा आधाभन्दा बढी सङ्ख्यामा कथित उच्च जातका पुरुष नै छन् । उक्त संस्थाको उच्च पदमा आसीन हुने अवसर महिलाले सायदै पाएका छन् । मधेसबाट एउटा मुहार भेटिन्छ, जसलाई सबैको मुख थुन्नकै लागि देखाइएको भान हुन्छ । दलित त धर्मग्रन्थ वा औपचारिक शिक्षा लिनबाट वञ्चित समुदाय नै भइहाल्यो ।
यसरी शब्दकोशमा हिन्दु, उच्च जातीय पहाडी खस पुरुषको अहङ्कार, चेतना र मनोविज्ञानको प्रभाव छ, जसले महिला, दलित तथा विभिन्न उत्पीडित जात–समुदायको परिचयमै प्रहार गरेको छ । परिणामस्वरूपः यो शब्दकोश वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लिङ्गभेदी शब्दशास्त्र हो भन्न किञ्चित हिच्किचाउनु पर्दैन ।
अब नेपाल प्राज्ञ–प्रतिष्ठानको ‘प्राज्ञ परिषद्’ का जात व्यवस्थाको विचारबाट प्रशिक्षित सदस्यहरूले आफ्नो चेतनामा ‘यथास्थिति’ कायमै छ र शब्दार्थ निर्माण प्रक्रियामा पनि त्यो झल्किएको छ भन्ने विषय आत्मबोध गर्नुपर्छ । ‘ज्ञान’ निर्माण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण सुविधा प्रदान गर्ने र भूमिका खेल्ने आधिकारिक नेपाली भाषाको शब्दकोशले कुनै पनि जात, लिङ्ग, वर्ण, क्षेत्र, भूगोल र समुदायका मानिसको भावनामा ठेस पुग्ने शब्द र अर्थ समावेश गर्नु शोभनीय देखिँदैन ।
शब्दकोशमार्फत जति पनि साहित्य सिर्जना भएका छन्, तिनले पहिले सिक्न चाहने सिकारुकै दिमाग कब्जा गर्छन् । शब्दकोश आफैं मानिसलाई को अपमानयोग्य र को मानयोग्य छ भनेर चिनाउन उद्यत छ ।
शब्दकोश लेखनको सुरुआतदेखि परिमार्जनको समयसम्मै सहभागीहरूमा ज्यादा ब्राह्मणहरूकै वर्चश्व हुँदै आइरह्यो । यो क्रम अहिले पनि चालु छ । तिनले ‘ब्राह्मण–झुन्ड’ भित्र नअटाइएका समुदाय तथा जात या लिङ्गका मानिसलाई आफ्नो परिचय आफैँ दिने मौकै दिलाएनन् । न त कुनै दलित, महिला या जनजातिको आँखाबाट नियालेरै हेरे ।
परिचय अरूले दिएर हुँदैन, स्वयम्ले आफूलाई चिनाउनुपर्छ भन्ने स्वीकार गरिन्थ्यो भने जनजातिलाई सिकार खेल्ने जातिको रूपमा मात्रै चिनाइँदैनथ्यो । सयौं वर्षदेखि यस मुलुकका खस–आर्य शासकको स्वार्थअनुरूप ‘युद्धको सिकार’ बनिरहेकालाई न्यायपूर्ण विशेषण दिइएको हुन्थ्यो भने मुलुकलाई ‘वीर गोर्खा’ भनी चिनाउनेको परिचय सोहीअनुरूप दर्ज गरिएको हुनुपर्थ्यो । नरसंहारकारी युद्धको भुङ्ग्रोमा खरानी बनेर अथवा छातीमा बारुद थापेर मुलुकलाई गौरव गर्नलायक नाम दिनेहरू तिनको दिमागमै आउँदैनन् । ‘वीर गोर्खाली र गोर्खाली छोरो’ भनेर गौरवान्वित हुँदै यही विशेषणमार्फत आफूलाई चिनाउन हतार गर्ने ब्राह्मणहरूले यो ‘पदवी’ पाउन ज्यानको बाजी थाप्ने र थापिरहेका जनजातिलाई नयाँ परिचय दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
शब्दकोशलाई ज्ञानको सङ्ग्रह र समानार्थी/अनेकार्थी शब्दको अनुपम संयोजन मान्ने हो भने यसले कस्तो ज्ञान प्रदान गरिरहेको छ र कस्तो ज्ञानसँग साक्षात्कार गराइरहेको छ भनी घोत्लिनु जरुरी छ । शब्दकोशले विविध अर्थ मात्रै दिएको छैन कुन सुन्दर, कुन कुरूप, के उदात्त, के तुच्छ, के ठीक, के बेठीक, को अब्बल, को बेकामे र को नालायक भन्ने धारणा बनाउन पनि उत्प्रेरित गरेको छ । साथै पाठकको सोच–व्यवहारमा कोही व्यक्तिप्रति सोही शब्दार्थअनुरूपको व्यवहार गर्न र भाषा प्रयोग गर्न छाप पनि छोडेको छ । यसो किन गरिएको छ भने यो अभ्यास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र अझ बढी राजनीतिक (शासकीय) तत्त्वहरूको परिणाम हो ।
शब्द र अर्थ निर्माण प्रक्रियामा कसलाई कुन शब्दार्थ र विशेषणले सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय विविध तत्त्वहरू शक्ति (पावर), अवस्थिति, लिङ्ग, सार्वजनिक परिचय (फेस), वर्ग आदिले पनि निर्धारित गर्ने नै भयो ।
अबको आवश्यकता सम्बोधनका दृष्टिले भाषिक समानता कायम गर्नु पनि हो । ‘खाली पानारूपी मस्तिष्क’ का साथमा हुर्किएका बालबालिकालाई यस्ता विभेद र भेदभाव प्रस्ट बुझाउने शब्द सिकाउनु हुँदैन । बालबालिकाका बोलीले टिप्नुअगावै अर्थहरूमा ‘अपडेट’ गर्नुपर्ने बारे मन्थन हुनुपर्छ । विशेष जात, जाति, लिङ्ग, समुदायका मानिसबारे जबर्जस्ती निर्मित ‘भाष्य’ हरू शब्दकोशबाट हटाउनेबारे गहन छलफल गर्नु अब जरुरी छ । यस विषयमा अबेर नगर्नु नै मान्छेको मन–मस्तिष्कमा लागेको चोटको ‘ओखतीमुलो’ सुरु गर्नु हो । अब शब्दकोश संशोधन–परिमार्जन गरी शब्द र अर्थले झुकाएको शिरको शीघ्र ‘माङ्गेना’ गरियोस् ।
प्रकाशित : मंसिर ४, २०७८ १०:४२
एक आदि विद्रोहीको अन्त्य
आफूविरूद्ध आवाज उठाएपछि तत्कालीन पञ्चायती शासकले ०३६ सालमा धनकुटा छिन्ताङमा १७ जनाको ‘सफाया’ गरेको थियो । मारिएकाहरुको स्मृतिमा कात्तिक २९ गते ‘सहिद स्मृति दिवस’ मनाइन्छ । छिन्ताङ विद्रोहका एक ‘नायक’ गडुल राईलाई २०६३ सालको हिउँदमा भेटेका थिए मानवशास्त्री सुरेश ढकालले । ढकाल लेख्छन्, ‘आफैंले देखेका र प्रेम गरेका सपनाले गडुलको जिन्दगी बिथोलिरहेको थियो । उनमा अझै विद्रोहको भोक बाँकी थियो ।’
मंसिर ४, २०७८ सुरेश ढकाल
गड्याङ र गुडुङ मेघ पनि होइन आकाश सफा छ,छिर्का र छिर्की पानी त होइन रगतको टाटा छ
४२ वर्षअघि (२०३६ को हिउँदमा) धनकुटा खाल्सा क्षेत्र त्रसित थियो । जनता कहालीलाग्दो आतंक र घोर पीडामा थिए । त्यही त्रासदीको सविस्तार वर्णन गर्थ्यो चित्र निरौलाले लेखेको माथिको गीतले, जुन मैले पटक–पटक सुनेको थिएँ रामेश, मञ्जुल आदिका स्वरमा । त्यसबखत यो गीतले मेरो किशोर मनमा समेत एउटा त्रास र आक्रोश पैदा गर्थ्यो । यो खासगरीे ०३७–०३८ साल आसपासको कुरा थियो ।
यो त्यतिबेलाको कुरा थियो, जतिबेला निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था उत्कर्षमा थियो । ‘खतरनाक’ अनुदार ठानिने सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए । त्यही समय धनकुटाको खाल्सा क्षेत्रमा दर्दनाक नरसंहारको व्यूह रचिएको थियो, जुन पछि छिन्ताङ काण्डको नाममा चर्चित बन्यो ।
छिन्ताङ विद्रोहको त्यो कथा निकट इतिहासको एउटा वियोगान्त कथा हो, जुन बारम्बार भनिएको छ । यो कथा अरू केही वर्षसम्म भनिनेछ वा भनिनुपर्नेछ । यो द्वन्द्व र हिंसाको कथा हो । यो मुक्तिकामी जनताको सपनाको अवसानको कथा पनि हो । यो नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको विकास र विस्तार बुझ्न सहयोग पुर्‍याउने सन्दर्भको कथा पनि हो । किसान विद्रोह र राजनीतिक दलहरू, खासगरी कम्युनिस्ट राजनीतिको सम्बन्ध केलाउन एउटा दृष्टिकोण दिने कथा पनि हो ।
घटनाको लामो अन्तरालपछि, २०६३ साल हिउँदको यस्तै कुनै एक दिन त्यही त्रासदीको थप कथा जान्न हामी छिन्ताङ पुगेका थियौं । तर, यो यात्रा विवरण वा छिन्ताङ काण्डको नालीबेली भने होइन । त्यसबेला भेटिएका र स्मृतिमा गढेर बसेका छिन्ताङ विद्रोहका एक ‘प्रोटागोनिस्ट’ गडुल राईलाई सम्झिने प्रयास मात्रै हो ।
गडुललाई उनकै शब्दमा सानो ‘खिचिरमिचिर’ दोकानसमेत भएको छिन्ताङको पञ्चकन्यास्थित उनैको घरमा भेटेका थियौं । पहिलोपटक भेट्दा वा देख्दा उनी थोत्रिइसकेको पावरवाला चस्माको सहाराले ध्यानपूर्वक पत्रिका पढिरहेका थिए । त्यो थियो ‘जनादेश’ पत्रिका । हामी काठमाडौंबाट आएको र उनीसँग कुरा गर्न चाहेको बताउँदा गडुल ‘आफ्नो कथा’ सुनाउन तयार भइहाले, मानौं आतुर भएर हामीलाई नै कुरेर बसिरहेका थिए ।
आठ दिन त्यस क्षेत्रमा बस्यौं र उनीसँगको बस–उठ पनि जम्मा त्यति नै दिनको रह्यो । उनीसँगै खोकु छिन्ताङको कान्ला र पाखा हिँड्यौं, उकाली–ओराली गर्‍यौं । उनका तत्कालीन सहकर्मीहरूसँग भेट्यौं । उनका जीवनका केही आरोह–अवरोह बुझ्ने चेष्टा गर्‍यौं ।
उनी माओवादी बनेका रहेछन् त्यसबखत । कथाहरू सुनिरहँदा लाग्थ्यो, आफैंले निर्माण गरेका क्रान्तिका मान्यताहरूबाट बन्दी बनाइएका छन् उनी । आफैंले देखेका र प्रेम गरेका सपनाले उनको जिन्दगी बिथोलिरहेको थियो । उनमा अझै विद्रोहको भोक बाँकी थियो ।
उपलब्ध गणतन्त्र र पछिल्लोपटक आफैंले समर्थन गरेको माओवादी पार्टीप्रति समेत उनको चरम असन्तुष्टि थियो । वर्ग–दुस्मन खत्तम पार्ने भनिएको क्रान्तिको सर्वोच्च नेता प्रचण्डप्रति आक्रोस थियो । भन्थे, ‘प्रचण्डले धोका दिए, क्रान्तिप्रति गद्धारी गरे ।’ यो संवाद विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको धेरै समय नहुँदैको थियो ।
सहिदभूमि गाउँपालिकाको छिन्ताङस्थित सहिदपार्क । तस्बिर : बबिता शर्मा
क्रान्तिकारी हुनुको सबैभन्दा सुन्दर र रोमाञ्चक पक्ष भनेकै क्रान्तिकारी हुनु हो भन्ने कुरा सायद उनको हकमा हुबहु लागू हुन्थ्यो । हामीले भेट्दा पनि उनी लडाइँमा निस्किन ठिक्क परेको कुनै योद्धाजस्ता महसुर र वेगवान देखिन्थे ।
जर्ज बनार्ड शले भनेका थिए, ‘क्रान्तिले कहिले पनि बर्बरताको भारी कम गरेको छैन बरु केवल काँध मात्रै सारेको छ ।’ गडुलको अनुभवमा क्रान्तिले उही प्रवृत्तिलाई पुनःस्थापना गर्‍यो, जसको अन्त्य उनले चाहेका थिए । त्यसैले उनमा विद्रोहको आगो अझै बाँकी थियो ।
यो तिनै विद्रोहीको कथा हो अर्थात् छिन्ताङ विद्रोहका तिनै ‘कमान्डर’ गडुल राईको एक कथा ।
गडुल राईले हामीलाई सुनाएको उनको कथाको संक्षिप्त रूप यस्तो थियो ।
०२४ सालदेखि औलो उन्मूलनमा जागिर खाएका उनी ०२७–२८ मा झापातिर काम गर्थे । तलब र भत्ता गरी महिनाको १२० रुपैयाँ कमाइ हुन्थ्यो । त्यति नै बेला उनी एक झापाली विद्रोहीको संगतमा पुगे । ती विद्रोहीले भनका रहेछन्, ‘पैसाको लोभमा फस्ने होइन, देशका लागि बलिदान गर्नुपर्छ ।’ लहैलहैमा गडुलले जागिर छोडे, गाउँ फर्के, गाउँलेलाई जागरुक बनाउन । ‘रातो झन्डा’ भन्नेहरूको सम्पर्कमा पुगे । ‘त्यसपछि जातीय मुक्ति मोर्चा आयो, अनि पूर्व कोसी प्रान्तीय भन्ने आयो, को के (कोअर्डिनेसन केन्द्र) भन्ने पनि आयो, त्यसपछि माले आयो । त्यसैगरी म मसाल बनें । मार्क्सवादीको सम्पर्कमा पनि आएँ...,’ यसरी उनी क्रमशः स्मृतिमा जाने कोसिस गर्थे ।
मालेपछि उनी एमाले बने । र, पछि माओवादी । भन्थे, ‘चौबन्न–पचपन्न सालदेखि माओवादीका नेताहरूको झोला बोक्ने कमारो भएर बसेको छु ।’ माओवादीप्रतिको वितृष्णा प्रस्ट देखिन्थ्यो उनको बोलीमा, ‘माओवादी बन्ने रहर त थिएन, तर काम गर्नुपर्छ भनेर किरात राष्ट्रिय मोर्चाको जिल्ला सदस्य बनाइदिए ।’ ०६० सालमा पुलिसले पक्राउ गर्‍यो, १८ दिन हिरासत बसे । ‘बूढो भएर पनि माओवादी हुने ?’ भन्दै धुस्नो हुनेगरी कुटे र अन्त्यमा तारिखमा छोडे । ‘तर, सबैभन्दा ठूलो गुनासो माओवादीमाथि नै छ,’ उनको निचोड थियो ।
कहिल्यै विद्यालय जान नपाए पनि गडुल सामान्य पढलेख गर्न सक्थे । जतिबेला ‘कमिटी प्रणाली’ बारे थाहा थिएन उनी नरबहादुर कुथुमी, भक्त बोलाना राई, गोविन्द विकल, बम देवान आदिका सम्पर्कमा आए । कम्युनिस्ट पार्टीमा संगठित बने । उनिहरू स्थानीय जिम्वाल मझिया राईको शोषणविरुद्ध संगठीत हुँदै थिए । सम्झिँदै गए, ‘शोषणको स्वरूप निर्दयी खालको थियो । सोझा गाउँलेहरूले दिनहुँ अमानवीय व्यवहार झेलिरहेका थिए । भूमिसुधारको कुनै प्रभाव थिएन । जग्गा जमिन मझियाहरूकै कब्जामा थियो । गाउँले किसान दाससरहका कृषि मजदुर मात्रै थिए । बेठ–बेगारी बुझाउनुपर्थ्यो । गरिबी चरम थियो । भोकै बस्नुपर्ने अवस्था थियो ।’
यस्तै पृष्ठभूमिमा भएको थियो– शृंखलाबद्ध विद्रोह । ०३६ कात्तिक–मंसिरको छिन्ताङ विद्रोहचाहिँ उच्चतम स्वरूप थियो । गडुल तिनै विद्रोहका स्थानीय नेता थिए । सुरा र अन्य गाउँलेका दाँजोमा तराई–मधेश देखेका ‘जान्ने–बुझ्ने हुँ’ भन्ने लाग्थ्यो रे उनलाई । उनी भन्थे, ‘म उहिले नै अहिलेको मिलिसियाको कमान्डरजस्तो थिएँ ।’
‘उहाँमा अलिक समस्या छ,’ उनको विद्रोही स्वभावप्रति लक्षित थियो सहयोद्धाको यो टिप्पणी । तर, गडुललाई लाग्थ्यो– आफ्नो विद्रोही स्वभावमा होइन, समस्या आफ्नै कमरेडहरूमा आएका कारण उनी अझै विद्रोही बनेका हुन् ।
अल्वेयर कामुको ‘म विद्रोह गर्छू त्यसैले मेरो अस्तित्व छ’ भनेझैं गर्थे गडुल ।
‘सामन्तीलाई नगिँडी, सैनिकसँग नभिडी
आउँदैन है जनवाद भाषण ठोकेर’
यो उनीहरूले गाउने गीत मात्रै थिएन विद्रोहको स्वर थियो । र, उनका लागि राजनीतिक बाटो पनि ।
छिन्ताङ : सन्दर्भकथा
जुन विद्रोह भयो र त्यसभन्दा कैयौं गुणा दमन भयो, विद्रोह भएकै ठाउँमा पुगेर सहिद–परिवारलाई सुनिरहँदा हामीलाई त्यो त्रासदीपूर्ण मात्रै होइन, अकल्पनीय नै लाग्यो ।
‘दमनको योजना माथिबाटै बनेको थियो, माथिबाट भनेपछि तपाईंले बुझिहाल्नुभो...’, तत्कालिन पूर्वाञ्चल डीआईजी दिलबहादुर (डीबी) लामाले हामीसँगको भेटमा भनेका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री थापाको भनाइमा ‘त्यो राज्यविरुद्धको द्रोह थियो । सरकार प्रमुखका हैसियतले त्यसलाई दमन गर्नु मेरो कर्तव्य हुन्थ्यो । यसमा माथि (दरबार) को कुनै चासो थिएन ।’
यो सन्दर्भले त्यतिबेला छिन्ताङ विद्रोहलाई राज्यले कुन रूपमा लिएको थियो भन्ने उजागर गर्थ्यो । तर, विद्रोहको नेतृत्व लिएको भनिने माले पार्टी त्यो तहमा गम्भीर भएको देखिएन ।
तत्कालीन नेकपा मालेको मुखपत्र ‘वर्ग संघर्ष’ (अंक १५, २०३७) मा त्यस घटनाका सम्बन्धमा यस्तो समीक्षा थियो, ‘सशस्त्र संघर्ष नगरी मुक्ति पाइन्न भन्ने विचारको प्रचार भए पनि कसरी सशस्त्र संघर्ष गर्ने हो भन्ने सवालहरूमा स्पष्ट समझदारी नरहनाले केही दुस्साहासवादी काम भए ।... वास्तवमा बनाइएका केही गोरिल्ला दस्ताहरू पनि सशस्त्र प्रतिरोधका लागि मानसिक र भौतिक रूपले तयार भैसकेका थिएनन् । ...वामपन्थी
भड्काउवाद र अनेक कमजोरी भएको थियो ।’
गडुल भन्थे, ‘यम बराल भन्ने एउटा चटपटे ठिटो थियो । उसैले उकास्यो । ऊचाहिँ बिजुलीको वेगमा कता बेपत्ता भयो ।’
‘टिन–एज’ पनि पूरा नगरिसकेका यम बराल त्यस क्षेत्रमा पार्टीको जिम्मेवारीमा थिए । उनको ढंग नपुगेको भनेर तत्कालीन पार्टीभित्र र बाहिर पनि आलोचना भएको थियो । उनीविरुद्ध पार्टीभित्रै पनि उजुरी परिसकेको रहेछ । उनको ‘उरन्ठ्यौलो कार्यशैली र चिन्तन’ लाई छिन्ताङमा बेहोर्नुपरेको नोक्सानका लागि जिम्मेवार ठानियो । त्यसो त मदन भण्डारीले समेत पटक–पटक भ्रमण गरेको र सशस्त्र विद्रोहका लागि हतियार जम्मा गर्न ‘उक्साएको’ पनि भनिएको थियो । यद्यपि यम बरालको भनाइमा त्यो सबै पार्टीको योजना र नीतिअनुसार नै भएको थियो । बरालले भनेका थिए, ‘मैले त्यो ठाउँ पार्टीको निर्देशनमा नै छोडेका थिए, भागेको थिइनँ ।’
यस्तो थियो छिन्ताङ विद्रोहलाई हेर्ने सरकारी र तत्कालीन माले पार्टीको दृष्टिकोण । उक्त घटनाप्रति अन्य कम्युनिस्ट घटकहरूको दृष्टिकोण सकारात्मक हुने त कुरै भएन । कांग्रेस र पञ्च एकै कोटीका दुस्मन ठानिन्थे । छिन्ताङ विद्रोह भएको वर्षको दसैंताका ‘राजा र बीपी घाँटी जोडिएका नाग हुन्’ भन्ने आशयको पर्चा छापेर बाँडिएको थियो ।
त्यस क्षेत्रमा २०२७ सालदेखि नै मझिया राईहरूको चर्को शोषण, अत्याचार र व्यभिचारविरुद्ध साना–ठूला प्रतिरोधपूर्ण कारबाही र विद्रोह भइरहेकै थिए । ती शृंखलाबद्ध विद्रोहलाई बृहत्तर रूपमा पञ्चायतविरुद्धको प्रतिरोधको रूपमा पनि हेरिन्थ्यो । त्यस वर्षको सुरुदेखि नै गडुल र उनका केही सहयोद्धाले घरेलु हतियार जम्मा गर्ने, स्थानीय ‘सामन्त’ लाई कारबाही गर्ने, भकारी लुट्ने, बाख्रा, सुंगुर खोरबाट तान्ने, घर–गोठमा आगो लगाइदिने गतिविधि बढाउन थालेको थिए । उनीहरूले जानेको–सकेको प्रतिरोधको स्वरूप त्यस्तै थियो । गडुल ती सबै योजना बनाउने र कारबाहीको नेतृत्व गर्ने प्रमुख व्यक्तिमध्ये एक थिए । तत्कालीन पार्टीले पनि सोहीअनुसारको निर्देशन दिने गरेको थियो । यो सबको सुइँको पाएका स्थानीय पञ्चहरूले सशक्त कारबाहीको मागसहित उजुरी गरेका थिए । बताइएअनुसार, प्रधानमन्त्रीसमक्ष नै अनुरोध गरे– व्यवस्थाविरोधि गतिविधि दबाउन र स्थानीय पञ्चहरूको सुरक्षा गर्न ।
विद्रोहीहरू शान्त हुने सुरमा थिएनन् । बरु उजुरीपछि गाउँ आएका प्रहरीमाथि कारबाहीको तयारी गर्दै थिए । प्रहरीलाई खान, बस्न दिएको र सुराकी गरेको ‘अपराध’ मा व्यक्तिका घर जलाउने, हातपात गर्नेजस्ता ‘कारबाही’ गरे । यसबाट जिल्लाकै प्रहरीहरू पनि आत्तिएका थिए । उनीहरूले पनि ‘ठूलै राज्य द्रोह हुन लागेको’ र ‘ठूलै शक्तिले मात्रै दबाउन सकिने’ रिपोर्ट गरे । पछि माथिल्लो तहमै दमनको योजना बनेको थियो ।
गाउँ नै घेराबन्दी गर्दै विभिन्न नाकाबाट प्रवेश गर्न थाले प्रहरी । कात्तिक २४ मा प्रहरीले गाउँका असल, इमानदार र प्रचुर सम्भावना भएका एक होनाहार स्थानीय युवा नेता गोपाल आनन्द राईलाई घरबाटै पक्राउ गरे र हत्या गरे । गोपाल आनन्दको हत्यासँगै छिन्ताङमा अत्याचारको शृंखला सुरु भएको थियो । मंसिरको पहिलो सातासम्म १७ गाउँलेको हत्या गरिएको थियो । मारिनेमा स्थानीय राई र दलित थिए, जसमध्ये कोही संगठित विद्रोही थिए भने केही निर्दोष पनि प्रहरी ज्यादतीको सिकार भए । पूरै गाउँ सातादिनभन्दा बढी प्रहरीहरूको उन्माद र हत्या शृंखलाले आतंकित बन्यो । थुप्रै युवा गाउँ छाडेर भागे । कत्तिले जंगल र गुफाहरूमा कन्दमूल खाएर तथा भोकभोकै पनि ज्यान जोगाए ।
दुर्दान्त घटना थियो त्यो । यस्तो लाग्थ्यो, त्यस आतंकले अहिलेसम्मै पनि लखेटिरहेकै छ । पीडित जनता खासगरी त्यतिबेलाका विद्रोही–सहिद परिवार राज्यको त्यो आघात र अहिलेको बेवास्ताले झनै पीडित बनेका छन् । यिनैमध्ये कै एक थिए गडुल राई ।
छिन्ताङको त्यसबेलाको सघंर्ष, विद्रोहको ढंग र शैली हेर्दा लाथ्यो, माओवादी सशस्त्र विद्रोहको त्यो प्राग्–स्वरूप थियो र नियति पनि ।
फेरि गडुलकै कथा
उनले हामीलाई सुनाएको कथाको बाँकी अंश यस्तो थियो ।
त्यतिबेला उनी धेरै नेतालाई चिन्थे, तर पछि नेताहरूले उनलाई चिनेनन् । गुनासो त हुने नै भयो । लाग्थ्यो रे, ‘गरिब किसानको मुक्तिका लागि क्रान्तिमा त होमिने हो, मरे सहिद, बाँचे मुलुक हल्लाउनेछौं ।’ तर, ‘व्यवस्थाविरोधी’ भनेर मारिएका ती सहयोद्धा र निर्दोषलाई परिवर्तित राज्यले सहिद घोषणासमेत गरेन । ‘उनीहरू हाम्रा मनमा त अमर छन्, तर राज्यले सम्मान गर्न सकेन । आज सहिद परिवारलाई राज्यको कुनै सहयोग छैन ।’ त्यसैले कहिलेकाहिँ लाग्दोरहेछ, ‘बेकारमा यत्रो दुःख गरिएछ ।’
खासमा माओवादीभन्दा अर्कोलाई ‘राम्रो’ भन्न नसकेको, तर माओवादीले पनि धोका दिएको निष्कर्षमा पुगेका थिए उनी । भन्थे, ‘जनताले अब साँचो क्रान्ति गर्नुपर्छ, मुक्तिका लागि ।’
हामीले गडुलका समकालीन योद्धाहरूलाई पनि भेट्यौं ।
कितापप्रसाद राई गडुलका दौंतरी थिए, छिन्ताङ काण्डका कमान्डरमध्येका एक । उनको त्यतिबेलासम्मको राजनीतिक यात्रा पनि समान । कितापप्रसाद भन्थे, ‘क्रान्तिबाहेक मेरो कुनै सपना छैन, पार्टीबाहेक मेरो कुनै घर छैन ।’ उनको विचारमा गडुल क्रान्तिकारी त हुन् नै, तर ‘अलिक अव्यावहारिक छन्, अलिक आवेशमा आउँछन् ।’ सायद उनको त्यही आवेश थियो, जसले उनलाई जीवनभरि क्रान्तिकारी बनाएको थियो ।
आँखीसल्लाका पञ्चलाल गडुलहरूलाई ‘मिलिटरी’ तालिम दिन्थे रे । भारतीय सेनामा १८ वर्ष काम गरेर फर्केका पञ्चलाललाई ०२७ सालमा धरानमा पेन्सन थाप्न जाँदा अपरिचित दुई ब्यक्तिले माओको रेड बुक थमाइदिएछन् । त्यहीँबाट उनको राजनीतिक जीवन सुरु भएको थियो । त्यसपछि नै स्थानीय तहमा विद्रोह सुरु गरेका उनी जेल परे ६ वर्ष । पछि मालेको सम्पर्कमा पुगे । मसाल बने । अन्ततोगत्वा माओवादी । ७३ वर्षको उमेरमा पक्राउ परे । ‘यस्तो बूढो भएर पनि माओवादी बन्ने ?’ भनेर उनले पनि खपिनसक्नु पिटाइ खाए ।
हामी गडुलका साथ लागेर तिनै पञ्चलाललाई भेट्न उनको घर पुगेका थियौं । माओवादीको जनसरकार उपप्रमुख भइसकेका उनी पछिसम्म पनि माओवादी नै थिए, तर माओवादीले भनेको ‘क्रान्ति पूरा गर्छ’ भन्नेमा शंका गर्थे । भन्थे, ‘माओवादीले नगरे अर्को पार्टी आउँछ, क्रान्ति त हुन्छ हुन्छ ।’ सदाबहार विद्रोही गडुल त्यसैले पनि उनका प्रिय थिए । यो २०६३ सालसम्मको कथा थियो ।
छिन्ताङ वियोगान्त र बाँकी प्रश्न
पाँच वर्षपहिले एउटा समाचार हुर्रिएर आयो, गडुलको मृत्युको खबर बोकेर । सँगै अर्को समाचार पनि थियो, फुटनोटजस्तै । सुन्दा अपत्यारिलो । मान्छेको जीवन विब्ल्याँटो परिस्थितिहरूको योग हो । मरे सहिद बनिन्छ भन्ने आदर्शबाट प्रेरित उनको जीवन संघर्ष र विद्रोहको कथाको अन्त्य हो । एउटा विद्रोहीको वियोगान्त । चुपचाप ।
तर, प्रश्नहरूको अन्त्य भइसकेको छैन । गडुल राईको जीवन नै प्रश्नहरूको शृंखला थियो । क्रान्तिको आकांक्षा र मुक्तिको सपनाको अंकुरण कसरी हुन्छ ? कसरी मौलाउँछ ? कसरी सपना भ्रममा बदलिन्छ र मुक्ति आकांक्षाको अवसान हुन्छ ? ०३६ सालमा १७ जना निर्दोष स्थानीय मारिएको त्यो छिन्ताङ विद्रोह र ६३ सालसम्ममा १७ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको तत्कालीन माओवादी विद्रोहबीच केही समानान्तर नियतिहरू थिए ? यी र यस्तै धेरै प्रश्नहरू बाँकी छन् ।
किसान विद्रोह र वामपन्थी राजनीति एवं पार्टी निर्माणको सम्बन्ध अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । स्थानीय विद्रोह र किसान आन्दोलनको उपयोग गरेर पार्टी निर्माण त भयो, तर विद्रोह र किसानको नियति किन सधैं असफल मात्र रहिरह्यो ? के सार्वभौम किसान आन्दोलनका रूपमा तिनको विकास हुन सक्दैनथ्यो ? के ती राजनीतिक दलहरूको विस्तारका औजार मात्र थिए ?
प्रश्नहरू अनेक छन् । जवाफका लागि फराकिलो सन्दर्भ, आलोचनात्मक दृष्टिकोण र मिहिन विश्लेषण आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि पनि छिन्ताङ विद्रोहहरूको ऐतिहासिक उपादेयता, गडुल राईहरूको निर्माण र विनिर्माणका कथाहरू भनिइरहनुपर्छ । तिनीहरू मान्छेका स्मृतिबाट हराउनु हुन्न । तिनीहरूलाई मान्छेका स्मृतिबाट हटाउनु हुन्न ।
प्रकाशित : मंसिर ४, २०७८ १०:४४